Recep Tayyip Erdogan: Warqaddii Trump qashin-qubka ayaan ku daray |
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa warqadda Donald Trump “ku dhex riday qashinka”, sida BBC loo xaqiijiyay.
Warqadda la qoray 9-kii bishan October, lana diray ka dib markii ciidamada Mareykanka ay ka bexeen Suuriya, wuxuu Trump ugu sheegay Erdogan: “Ha is adkeynin. Ha noqon doqon”.
Dad ka tirsan Madaxtooyada Turkiga waxay BBC u sheegeen in Erdogan uu warqadda “uusan aqbalin gebi ahaanteedaba”.
“Aan ka wada shaqeyno heshiis fiican! Ma dooneysid in aad masuul ka noqotid dilka kumannaan qof, anigana ma doonayo in aan masuul ka noqdo burburinta dhaqaalaha Turkiga – Waana sameyn doonaa,” ayuu Trump ku qoray warqadda.
“Taariikhda sida aad dooneyso ayey kuu xusi doontaa haddii aad midda saxda ah iyo qaabka wanaagsan aad u sameyso tan. Weligaa waxaad noqon doontaa qof xun, haddii wax wanaagsan aysan dhicin.”
Taas isagoo ka jawaabaya, ilo ku dhow madaxtooyada Turkiga waxay sheegeen: “Madaxweyne Erdogan waa la soo gaarsiiyay warqadda, wuu diiday waxa ku qoran oo dhan, wuxuuna ku daray qashinka”.
Kala qeybsanaan dhif ah ayaa sababtay in illaa 129 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ay ku biiraan Dimuquraadiga kuwaa oo si dhab ah u diiday tallaabada Trump. Waxay go’aankooda ku muujiyeen codeyntii Arbacadii.
Hoggaamiyayaasha Jamhuuriga waxay “hab dhaqankii” Ms Pelosi ku tilmaameen “mid aan habooneyn”, waxayna ku eedeeyeen “in ay soo duushay”.
Ms Pelosi iyo Mr Trump wuxuu sidoo kale midba midka kale ku eedeeyay “isku dhex yaac”, iyadoo markii dambe uu Trump bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawirka murankooda.
3:29 PM – Oct 16, 2019
Balse, Dimuquraadiyiinta ayaa amaanay sawirka waxayna ku tilmaameen “mid aan caadi ahayn iyo geesinimo” muujiyayna “xilligii ugu cajiibsanaa” ee Ms Pelosi.
Arbacadii la soo dhaafay, Madaxweyne Trump wuxuu sheegay in Mareykanka uusan faragelin ku sameyneyn howlgalka militari ee Turkiga, sababtoo ah “xuduuddeena ma ahan”, ayuu yiri. wuxuuna xulafadii hore ee Mreykanke ee Kurdiyiinta uu ku tiulmaamay “in aysan malaa’ik ahayn”.